Ganzabee Dibaabaa mt 1500'n shaampiyoonaa addunyaa taate - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home Ispoortii Atleetiksii Ganzabee Dibaabaa mt 1500’n shaampiyoonaa addunyaa taate
Siifan Hasan 3ffaa ta'uun xumurte
Gootittiin atleetii Oromoo Ganzabee Dibaabaa fiigicha meetira 1500 daqiiqaa 4:08.09 xumuruudhaan haadha meedaaliyaa worqee ta’uu dandetteerti. Ganzabeen morkattoota isii irratti ol’aantummaa kana kan argatte akka salphatti jechuun nidanda’ama. Ganzabetti aanaanii Feeyiz Kipyigoon (Keeniyaa) fi Siifan Hasan (Nezerlaand) 2ffaa fi 3ffaa ta’uudhaan xumuraniiru.
Fiigicha meetira 1500 Shaampiyoonaa Addunyaa magaalaa Beejiingitti geggeeffamaa jiru irratti jalqabumaa kaasee leensiin kameraa addunyaa hundi kan ture Ganzabee fi Siifan irra. Waamalee akka hinturre bu’aan fiigchaa mirkaneesseera. Siifan Hasan ammatti kan fiigdu Nezerlaandiin bakka buuteeti. Haa ta’uuyyuu malee, isiifi dandeettiin isiis kennaa dachii Oromooti.
Gootittiin atleet Ganzabee Dibaabaa maaliidhaaf akka dirree seente eenyuunuu caalatti kan beektu, jalqabumaa eegaltee ija isii meedaliyaa worqee irra gootee fiigicha hoogganuu kan eegalte. Takka erga funduratti baatee, gobbuu duubaan ari’u malee miilaan kan bira gayu tokko hinturre. Akka isaan biroo hafuuraafi anniisaa osoo hinfixatin ture, Ganzabeen, meedaaliyaa worqee harkatti galfachuudhaan shaampiyoonaa addunyaa mt 1500 ta’uu kan dandeette. Kuni hundatti kan agarsiise dandeettii addaa ganzabeen qabdu qofa osoo hintaane isiifi morkattoota isii jidduu hangam addaaddummaan dandeettii bal’aa akka ta’eedha.
Ganzabeen rikoordii mt 1500 woggaa 23 ture bara kana cabsuun isii yaadannoo yeroo dhiyooti. Bifa kanaan itti fufnaan ol’aantummaa Ganzabeen mt 1500 irratti qabdu kan uggu jira hinfakkaatu.
Previous articleNaayjeeriyatti jiraattonni gandaa nama shorbaa hate jedhan jiraa gubanii ajjeesan
Next articleTujjaarri Chaayinaa Waang Ji’aaliin guyyaa tokkotti biliyoona $3.6 kasaare